Cryptocurrency(Cryptocurrency) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
किन घट्यो क्रिप्टोमा क्रेज ? एक महिनामै बिटक्वाइनको भाउ २०%ले घट्यो
काठमाण्डौ । विश्वभरका लगानीकर्ताहरुले क्रिप्टोकरेन्सीमा गरिएको लगानी धमाधम झिकिरहेका छन्। सन् २०२२ को पहिलो सातामै लगानीकर्ताहरुले क्रिप्टोकरेन्सीसँग जोडिएका इन्भेस्टमेन्ट प्रडक्ट र फन्डबाट २०७ मिलियन डलर झिकिसकेका छन्। उनीहरुले यस्तो समयमा धमाधम क्रिप्टोकरेन्सीमा गरिएको लगानी झिकिरहेका छन्, जब प्रमुख क्रिप्टोकरेन्सीहरुको...
​क्रिप्टोकरेन्सीमाथि प्रतिबन्ध लगाउन कानुन ल्याउने तयारीमा भारत
काठमाण्डौ । भारतमा एउटा बहुप्रतीक्षित विधेयकमार्फत अधिकांश क्रिप्टोकरेन्सीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने योजना अघि बढ्ने भएको छ। भारत सरकारले डिजिटल मुद्राबारे आफ्नो धारणा केही नरम बनाउँछ कि भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो। नयाँ नियमअन्तर्गत प्रविधि प्रवर्द्धनका लागि गरिने केही प्रयोगबाहेक अन्य सबै अवस्थामा निजी क्रिप्टोकरेन्सी प्रतिबन्धित...
यी हुन् विश्वका १० ठूला क्रिप्टोकरेन्सी, के डलरलाई प्रतिस्थापन गर्लान् ?
काठमाण्डौ । संसारमा मानिसको आवश्यकतालाई पूर्ति गर्न एउटा वस्तुलाई अर्को वस्तुसँग साटफेर गर्ने चलन थियो। विकासक्रमसँगै वस्तुको विनिमय गर्न नगद (सिक्का वा नोट) प्रचलन सुरु भयो। अहिले संसार डिजिटल युगमा प्रवेश गरेको छ। नगदको सट्टामा अहिले डिजिटल भुक्तानीको प्रचलन बढ्दै गएको छ। विश्वमा अहिले विभिन्न डिजिटल मुद्राको प्रयोगको पनि बढ्दै...
नेपालीमा बढ्दैछ क्रिप्टो मोह, हङकङ र दुबईबाट कारोबार
– अर्जुन तिमिल्सिना काठमाण्डौ । लगानी गरेर पैसा कमाउन सबैलाई नै इच्छा हुन्छ। विकसित देशहरुमा लगानीका धेरै अवसर हुन्छन्। सेयर, डिबेन्चर बोन्ड, तेल, सुन तथा कमोडिटी मार्केर र क्रिप्टोकरेन्सी पनि वैधानिक नै रहेको छ। नेपालमा पनि लगानीको अवसर हुँदै नभएको होइन तर केही कममात्रै हो। अहिले संसारमा क्रिप्टोकरेन्सीले राम्रै बजार पाएको छ। कति...
ह्याकरको निशानामा क्रिप्टोकरेन्सी, ६०० मिलियन डलरको डिजिटल मुद्रा चोरी
काठमान्डौ । क्रिप्टोकरेन्सीको इतिहासमै पहिलो ह्याकर समूहले सबैभन्दा ठूलो र अपत्यारिलो चोरी गरेको छ। पोलिनेटवर्क भन्ने एउटा आर्थिक मिडियाले गरेको खुलासाअनुसार गत मंगलबार ह्याकर समूहले सिस्टममा ह्याक गरेर ६०० मिलियन अमेरिकी डलरबराबरको क्रिप्टोकरेन्सी चोरी गरेको हो। यो क्रिप्टोकरेन्सीको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो चोरी हो। ह्याकर...
भारतमा क्रिप्टोकरेन्सीहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाउने तयारी
काठमाण्डौ । भारत सरकारले बिटक्वाइनलगायत प्राइभेट क्रिप्टोकरेन्सीहरुलाई प्रतिबन्ध लगाउन कानुन बनाउने योजना बनाएको छ। यसका साथै भारत सरकारले केन्द्रीय बैंकद्वारा जारी गरिने आधिकारिक डिजिटल करेन्सीलाई व्यवस्थित गर्ने कार्ययोजना पनि बनाउने भएको छ। भारतको तल्लो सदनले गत शुक्रबार आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशित गरेको अजेन्डामा रिजर्भ...